25 Iimfundiso ZeBhayibhile Eziduduzayo Ukukhumbula Ukukhathalela KukaThixo
Khumbula ukuba uThixo uyayinyamekela le mibhalo yeBhayibhile malunga nenduduzo
UThixo wethu uyasikhathalela. Kungakhathaliseki ukuba kwenzekani, akaze asishiye. IsiBhalo sisitshela ukuba uThixo uyazi ukuba kwenzekani ebomini bethu kwaye uthembekile. Njengoko ufunda ezi ndinyana zeBhayibhile ezikhuthuzayo, khumbula ukuba iNkosi ilungile kwaye inomusa, umkhuseli wakho ohlala ekhona ngexesha leemfuno.
IBhayibhile yeBhayibhile yeNduduzo
Musa ukoyika; UYehova uThixo wakho uya kukulwa. ( NIV )
Duteronomi 31: 7-8
Yomelela kwaye ube nesibindi, kuba kufuneka uhambe nalaba bantu uye ezweni abafungela ookhokho babo uYehova ukuba bawanike, uze uhlukanise phakathi kwabo njengelifa labo.
UYehova uhamba phambi kwakho, abe nawe; akayi kukushiya okanye akushiye. Sukoyika; ungadikibala. "(NIV)
Yoshuwa 1: 8-9
Gcina le Ncwadi yomthetho rhoqo emlonyeni wakho; Cinga ngalo imini nobusuku, ukuze uqaphele ukwenza yonke into ebhalwe kuyo. Emva koko uya kuba yimpumelelo kwaye uphumelele. Ngaba andizange ndiwisele umthetho? Yomelela kwaye ube nesibindi. Sukoyika; Musa ukudimazeka, kuba uYehova uThixo wakho uya kuba nawe naphi na apho uya khona. (NIV)
INdumiso 23: 1-4,6
UYehova ungumalusi wam, andinanto nto. Undenza ndilale emadlelweni aluhlaza, undihola ecaleni kwamanzi aphumlileyo, Uhlaziya umphefumlo wam. Nangona ndihamba emlanjeni omnyama, andiyikwesaba ububi, ngokuba wena unami; Intonga yakho kunye nabasebenzi bakho, bayandithuthuzela ... Ngokuqinisekileyo ububele bakho nothando luya kundilandela yonke imihla yobomi bam, ndihlale endlwini kaYehova ngonaphakade. (NIV)
INdumiso 27: 1
UYehova ungukukhanya kwam, nosindiso lwam; ngubani na ukuba ndiyike? UYehova uyinqaba yobomi bam-Ndiya koyika bani na? (NIV)
INdumiso 71: 5
Ngokuba wena uyithemba lam, Nkosi enguMongami, ithemba lam ukususela ebusheni bam. (NIV)
Ndiphe isibonakaliso sobuhle bakho, ukuba iintshaba zam zibone, zihlazeke, ngokuba wena, Yehova, undincede, wandithuthuzela.
INdumiso 119: 76
Kwangathi uthando lwakho olungathandekiyo lube yinduduzo yam, ngokwelizwi lakho kumkhonzi wakho. (NIV)
Xa ulala, awuyi kuyika; xa ulala, ubuthongo bakho buya kuba mnandi. (NIV)
INtshumayeli 3: 1-8
Kukho ixesha lezinto zonke, kunye nexesha lemisebenzi yonke phantsi kwezulu :
ixesha lokuzalwa kunye nexesha lokufa,
ixesha lokutshala kunye nexesha lokunyusa,
ixesha lokubulala kunye nexesha lokuphilisa,
ixesha lokudiliza kunye nesikhathi sokwakha,
ixesha lokulila kunye nexesha lokuhleka,
ixesha lokulila kunye nexesha lokudansa,
ixesha lokusabalalisa amatye kunye nexesha lokubaqokelela,
ixesha lokuvuma kunye nexesha lokuyeka,
ixesha lokukhangela kunye nexesha lokuyeka,
ixesha lokugcina kunye nexesha lokulahla,
ixesha lokukrazula kunye nexesha lokulungisa,
ixesha lokuthula kunye nexesha lokuthetha,
ixesha lokuthanda kunye nexesha lokuzonda,
ixesha lokulwa kunye nexesha loxolo.
Ngokuqinisekileyo uThixo uyisindiso lwam ; Ndiyathemba kwaye ndingesabi. UYehova, UYehova, amandla am, nokuzikhusela kwam; uye waba usindiso lwam. (NIV)
Memeza ngovuyo, mazulu; Jabulela, mhlaba; Kwaqhamuka ingoma, ziintaba! Ngokuba uYehova uyabaduduza abantu bakhe, abe novelwano kubantu bakhe abahluphekileyo. (NIV)
Isaya 57: 1-2
Abantu abalungileyo badlula; abahlonela uThixo bahlala befa ngaphambi kwexesha labo.
Kodwa akukho mntu ubonakala ekhathalele okanye azibuze ukuba kutheni. Akukho mntu ubonakala eqonda ukuba uThixo uyabakhusela ebubini obuzayo. Kuba abo balandela iindlela zikaThixo baya kuphumla ngoxolo xa befa. (NIV)
Yeremiya 1: 8
"Musani ukoyikisa, ngokuba mna ndinokunihlangula," utsho uYehova. (NIV)
UYehova ulungile kwabo ba nethemba kuye, kumfunayo; (NIV)
Mika 7: 7
Ke mna, ndilinde ithemba likaYehova, ndilindele uThixo wam uMsindisi; UThixo wam uya kundiva. (NIV)
Mateyu 5: 4
Banoyolo abo balilayo, kuba baya kududuza. (NIV)
Bakuva oko bathethayo, uYesu wathi kuye, "Ungesabi, kholwa nje." (NIV)
Luka 12: 7
Eneneni, neenwele zentloko yenu zibaliwe zonke. Musa ukoyika; uxabisa ngaphezu kweentlunkulu ezininzi. (NIV)
Yohane 14: 1
Musa ukuvumela iintliziyo zenu zikhathazeke.
Ukholelwa kuThixo; kholelwa nakwam. (NIV)
Uxolo ndiya kuhamba nawe; uxolo lwam ndikunika lona. Andikuniki njengoko ihlabathi linikeza. Musa ukuvumela iintliziyo zenu ukuba zikhathazeke kwaye ningesabi. (NIV)
Yohane 16: 7
Noko ke, ndithi kuni inyaniso: kukunceda ukuba ndihambe; kuba ukuba andihambi, uMncedi akayi kuza kuwe. Ukuba ndihamba, ndiya kumthuma kuwe. (NIV)
Kwangathi uThixo onethemba angakuzalisa ngayo yonke injabulo noxolo njengoko uthembela kuye, ukuze uphuphe ithemba ngamandla kaMoya oyiNgcwele . (NIV)
2 kwabaseKorinte 1: 3-4
Udumiso kuThixo noYise weNkosi yethu uYesu Kristu , uYise wenceba noThixo wenduduzo yonke, osithuthuzelayo kwiintsizi zethu zonke ukuze sikwazi ukuthuthuzela abo basiphi na ingxaki ngentuthuzelo esiyifumanayo kuThixo. (NIV)
Hebhere 13: 6
Ngoko sithi ngokuzithemba, "INkosi yam ngumsizi wam, andiyikiyika. (NIV)
Umthandazo kuSt. Margaret Mary Alacoque
Iingcebiso ezi-6 malunga nendlela yokuthandaza
Umthandazo wokunyuswa kweSanta Nicholas
Amacandelo okuPapayi Okungakumbi
I-Error Errorme Error
Ziziphi i Tefillin?